Uvele enkantolo osolwa ngokubulala | News24
Uvele enkantolo osolwa ngokubulala
Bongani Mncwabe appeared briefly in the Pietermaritzburg Magistrate’s Court yesterday for allegedly killing Farhad Manjoo in a road rage incident at the weekend. PHOTO: Nhlanhla Nkosi
USAZOBHADLA esitokisini owesilisa osolwa ngecala lokubulala nelokuzama ukubulala nokusolwa ukuthi bekubangwa khona ukushayelisana kabi emgwaqeni.
UMnuz Bongani Mncwabe ubevele kafushane eNkantolo yeMantshi yaseMgungundlovu ngoMsombuluko mhla ka-2 kuNtulikazi (July) ebhekene necala lokubulala uMnuz Farhaad Manjoo kanye nelokuzama ukubulala uMnuz Rajesh Aumsdew.
Icala lakhe libe selihlehliselwa mhla zili-13 kuNtulikazi (July) ukuze ezofaka isicelo sebheyili.
Lesi sigameko senzeka ngoMgqibelo mhla zingama-30 kuNhlangulana (June) ekhoneni lomgwaqo u-Pietermaritz Street kanye no-Piter Kerchoff Street edolobheni laseMgungundlovu.
Lowo omele umbuso uNkk Rene Padayachee uthe uyaphikisana nokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili wabe esecela ukuba lihlehliswe icala.
“Kunezinto umbuso ongahambisani nazo kwidokodo lecala. Umphenyi waleli cala u-Warrant Officer Khumalo kodwa kunencwadi efungelwe efakwe u-Detective Constable Molefe othi akaphikisani nokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili ngoba wazinikela yena emaphoyiseni.
“Kunesinye futhi isitatimende esibhalwe elinye iphoyisa esithi liyaphikisana nokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili,” kubeka yena.
Uphinde waveza ukuthi ukuphepha kofakazi balesi sigameko akuqinisekisiwe futhi nemininingwane yakhe umsolwa ayikakaqinisekiswa.
Ummeli kamsolwa uMnuz Phumlani Fakude uthe umsolwa kumele adedelwe ngebheyili ngoba wazinikela yena emaphoyiseni ngemuva kwesigameko ayezitshela ukuthi esokudunwa imoto.
“UMnuz Mncwabe wazinikela yena emaphoyiseni emva kwesigameko ayezitshela ukuthi ngesokudunwa imoto. Wathatha namaphoyisa wahamba nawo wayowakhombisa lapho kwenzeke khona isigameko,” kubeka yena.
Uphinde waveza ukuthi umsolwa akanawo amacala awahambayo futhi akanawo amacala ake amalahla ngaphambilini.
UNkk Padayachee ukuphikisile obekushiwo uMnuz Fakude ukuthi umsolwa wayezitshela ukuthi udunwa imoto ngesikhathi sesigameko.
“Umbuso kunamanye amaqiniso ekusamele uwaphenye. Uyaphikisana ngokugcwele ukuthi umsolwa wayezitshela ukuthi udunwa imoto.
“Ngokobufakazi umbuso onabo bukhomba ngokusobala ukuthi lesi kwakuyisigameko sokushayelisana kabi emgwaqeni.”
Ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko uMnuz Manjoo kanye nabanye abangani bakhe babephuma emsebenzini eKismet Hotel nalapho kade eyimenenja khona kanti babesendleni kuyobheka omunye umsebenzi wokuhlobisa ngesikhathi bebandakanyeka engxabanweni nowesilisa abangamazi.
Kwaqhuma inganono kabili kwase kudubuleka uMnuz Manjoo esifubeni washona kwalimala noMnuz Aumsdew.